Kalsoonida Jirka Slim Qalabka Wadnaha Qalabka oo buuxa 50% Off
Home » Amazon » 50% Ka Jir Qalafsanaanta Jir-dhiska Qalabka Jilbirka jirka oo buuxa
50% Ka Jir Qalafsanaanta Jir-dhiska Qalabka Jilbirka jirka oo buuxa
Hel 50% Mashiinka Wadnaha Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Jirka ee Jirka oo dhan
Mashiinkaani wuxuu caadi ahaan u orday $ 500. Waxaa hadda ku jirta iibka loogu talagalay $ 249.99 oo leh Badeeco lacag la'aan ah Amazon !
Ku saabsan Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka jirka oo buuxa:
Miisaanka ugu badan ee isticmaalaha: 300 Lbs
Awoodda ugu badan ee 1.5hp
Awoodda Waxtarka: 600W
Voltage input: 100-120v
Xilliga Iskujirka 50-60Hz. Xawaaraha Sare 1-50
Haddii aad qabtid dhibaatooyin wadajir ah, aad qabtid xaalad wadnaha ah ama isticmaal qalabka wadnaha, waxaa lagula talinayaa inaad raadsato talo caafimaad inta aanad isku dayin inaad isticmaasho tababaraha qalfoofka.
Xusuusin: Mashiinkani wuxuu leeyahay maraakiib bilaash ah laakiin uma qalmo Amazon Prime. Celcelis ahaan Amazon qiimeynta dib u eegista 873 ee cutubkan waa 4 iyo badh ka mid ah xiddigaha 5!
Riix Halkan si aad u iibsato Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka ee buuxda maanta maanta laga bilaabo Amazon ee kaliya $ 249.99!
50% sale ee Qalabka Farsamada Qalabka Qalliinka Wadnaha Qalabka Qalabka Qalabka Qalafsan (Accident Fitness Slim Vibration Platform) wuxuu ansax ahaan u shaqeynayaa 5 / 3 / 15 waana la bedelayaa. Qiime kasta oo aad ka bixiso Amazon xilliga iibsigu wuxuu khuseeyaa amarkaaga.
Waxaa laga yaabaa 3, 2015 Jimicsiga Amazon, Mashiinka Isticmaalidda Wadnaha No Comment	amazon platform vibration
Spring 2015 Bixinta: Ku guuleysta Biyo iyo Cagaaran Dheeraad ah oo Leedahay Hoodie
2015 Khadka Dhameystirka 10 $ 100 La'aan $ 5 Kawnsalka Ballan-qaadka wuxuu ku xiran yahay 18 / 15 / XNUMX